गायक पशुपती शर्मा विरु!द्ध खनियो सिंगै दलित समाज ! रुपा सुनार का,ण्डले लियो उग्र रुप - Onlinenews Global
गायक पशुपती शर्मा विरु!द्ध खनियो सिंगै दलित समाज ! रुपा सुनार का,ण्डले लियो उग्र रुप
June 28, 2021 laxmiLeaveaComment on गायक पशुपती शर्मा विरु!द्ध खनियो सिंगै दलित समाज ! रुपा सुनार का,ण्डले लियो उग्र रुप
११ असार, काठमाडौं । कतिपय ठाउमा अझै पनि दलित अर्थात तल्लो जात भनेर छुवाछुतको चलन चलिरहेको छ । बाहुन क्षेत्री जस्ता जातिले दलित भनेर वर्गीकरण गरिएका जातिलाई घर भित्र पस्न न दिनी अर्थात अझै भन्दा पानि समेत छोएको नखाने कतिपय ठाउमा अझै जिवितै छन् । यो त् भयो दलित र क्षत्री बाहुन जातिको कुरा ? तर दतित भित्र पनि गैर दलित,सानो दतित,ठुलो दलित भनेर बैर्गीकरण गरिएका छन् । तिनीहरु बिचमा पनि पानि बाराबार भएका कति त् जलंत घट,ना छन् ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
सरकारले पनि दलित जनजाति कोटा भनेर छुट्ट्याएको छ । आखिर यो के केको लागि ? कसका लागि ? दलित नै छैन भने ? को हुन् दलित ? सरकारी काम काज हुन् यात प्राय ठाउमा हामीलाई कोटा छुट्याइएको छ भने उहाहरुकै मुखबाट सुनिएको पाईन्छ । अब समस्या कहाँ रहयो ? यतिबेला रुपा सुनारको घट!नाले निकै नै उग्र रुप लिईरहेको छ । समय परिवर्तनशील छ तर गाउ समाज परिवर्तन हुन् समय लाग्छ । एकातिर जातीय कुरा उठाउनु नै गलत हो । संसारमा २ ओटा मान्छेका जात छन् । महिला र पुरुष ? अर्को तिर भने हामि दलित हौ कोटा चाहिन्छ भन्नु पनि गलत हो । आखिर सहि कुन पक्ष ? निर्णय गरियोस ।
यहि रुपा सुनार सन्दर्भमा समालोचक दुर्गा पंगेनीले सामाजिक संजालमा यसरि लेखेका छन् । “पशुपती शर्माले “के को दमै के को कामी,के को जन जाती..जातका कुरा गर्नेहरु देशको लागि घाती”…यो शब्द बुन्दा र गाउदा दलित समाज सिंगै गायक पशुपती शर्मा विरुद्ध खनियो। आहुती दाई एक्लै यो गित ठिक छ विरोध नगरौँ भनेर बोलीरहे तर टुप्पाबाट पलाएका दलित अधिकारकर्मी हरुले माथि उल्येखित हरफमा ‘दमैकामी’ प्रयोग भएकै आधारमा गीत बन्द गराउन आन्दोलन गरे र गीत बन्द गराएरै छाडे..!
हामीले बारम्बार गीतको भाव बुझ्न अनुरोध गरिरह्यौँ तर डलरवादी दलीत अगुवाहरुको प्रभाव यस्तो पर्यो की त्यो समुदायका कोही पनि साथिहरु कुरा बुझ्न तयार नै भएनन। खासमा जातिय विभेद र छुवाछुत माथी सवैभन्दा कडा र ससक्त प्रहार गरेको क्रान्तिकारी गीत थियो यो-दलित मित्रहरू नै यो कुरा बुझ्न चाहेनन र फगत शब्द प्रयोगमा अल्झिएर गीतको विरोध भयो—विरोध गराईयो, त्यो विरोध गराउन डलरको खेती गरीयो …
आज गायक पशुपती शर्मा प्रश्न सोधिरहेछन…त्यो गीतमा के गलत थियो? कुन शब्द गलत थियो? आज रुपा सुनारको कथा त्यो गीतले बर्षौँ पहिले बोलेको थियो…तिमीहरुले गीतको मर्म बुजेनौ की एनजिओ हरुले गीतको गलत अर्थ लगाईदिए…! गीत बन्द गर्न विवश कलाकारले अब जवाफ पाउनु पर्छ ल कथित अगुवा साथिहरु …!मिलेर लडे मात्रै छुवाछुत अन्त्य हुन्छ र लडाई जितिन्छ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
August 24, 2021 August 24, 2021 laxmi